Apartment for Sale in Ahlone - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Apartments for Sale in Ahlone
AHLN 240၊ အလုံမြို့နယ်၊ဧရာဝတီလမ်းတွင်မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-7952445
My Land Real Estate Close
အလုံ ကွင်းကျောင်းလမ်း တိုက်ခန်းကျယ် (7)(8) လွှာရောင်းမည် ဓာတ်လှေကားပါ
Ad Number S-7952356
အာရှ အကျိုးဆောင် Close
အလုံ ကွင်းကျောင်းလမ်း တိုက်ခန်းကျယ် ဓာတ်လှေကားပါ (4)(5) လွှာ ရောင်းမည်
Ad Number S-7952293
675 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7943261
SABEI REAL ESTATE စံပယ်အိမ်ခြံမြေ Close
Ad Number S-7936870
AHLN 239 ၊အလုံမြို့နယ်၊ ငုဝါလမ်းတွင်ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
700 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7936818
AHLN 239၊ အလုံမြို့နယ်ငုဝါလမ်းတွင်ပထမထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
570 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7936797
1st floor apartment for sale in Ahlone township.
09258708266 / 09258708366 / 09258708466
Ad Number S-7932606
Htun Star Property Co., Ltd. Close
2nd floor apartment for sale in Ahlone township.
560 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7932594
အလုံ ကွင်းကျောင်းလမ်း တိုက်ခန်း မြေညီထပ် ရောင်းမည်
650 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7923876